EyeKhala 2, 2018 admin
EU ipalamente ipapashe ingxelo currency virtual neqaphela iinzuzo cryptocurrency
I-EU IPalamente ipapashe ingxelo omtsha osihloko sithi "iimali Virtual kunye iiBhanki ezingoovimba yomgaqo-lawulo wemali: selelo phambili.”
the 33 Ingxelo page yathi:
“zemali Virtual i uhlobo owayephila imali yabucala. Enkosi zabo zobugcisa, networks zabo transaction jikelele zikhuselekile kakhulu, ngaphaya, and fast. Oku kunika amathuba elungileyo kuphuhliso olungaphezulu. Ngokungafaniyo langaphambili 18 and 19 iphepha kwekhulu, VCs zisetyenziswa jikelele, indiva imida kazwelonke.”
imali uthango Crypto kubona utyalo-mali kakhulu 2018 ngaphezu kwabo bonke abantu 2017
Investment evela mali (VC) yeenkampani kunye nemali ngothango ikhule kakhulu.
Idatha evela Crypto Fund Uphando lubonisa njengoba ka June 15, babe 216 utyalo ku 2018, Ukuqobisana 236 kuba bonke kunyaka ophelileyo. Isixa lityale ukuza kuthi ga ngoku kulo nyaka, $638M, sele igqithile i 2017 iyonke of $ 497M.
Crypto nguye elikhulayo icandelo ngokukhawuleza yoshishino hedge fund.
Coinbase Okugcina ivula ngokusemthethweni ukuba ishishini
Okugcina Coinbase ukuvula ngokusemthethweni ushishino kunye nezicwangciso ukwamkela abaxumi ezibandakanya phambili imali uthango crypto, ukutshintshiselana neekomiti ICO.
mission Okugcina Coinbase kukuba ukwenza utyalo-mali lwemali yedijithali zifikeleleke kubo bonke iziko afaneleke zemali kunye fund uthango ehlabathini, kwaye unikeza i yamaziko kwibakala umthengisi-umthengisi kunye neenkonzo zayo ingxelo, kunye nenkqubo ebanzi ingxelo client.
Philippines ukuba akhuphe 25 mvume exchange cryptocurrency kwaye ifuna $ 1m zotyalo-mali imvume
Umlawuli we ummandla olawulwa ngurhulumente kwiiPhilippines wazityhila izicwangciso ukuba akhuphe 25 mvume utshintshiselwano cryptocurrency.
LweMimandla Economic Cagayan Authority (IZOHLWAYO), indawo yezoqoqosho esebenza ngurhulumente kwi ongasentla Philippines, luya kuvula iingcango zalo ukuba bonke 25 abaqhubi exchange cryptocurrency kulawulo layo irhafu-friendly, isaziso kwi website yayo kutyhilwa.
Ukufudukela-mvume - ngempumelelo ngokomthetho - ukutshintshiselana crypto iya kulandela itshekhi engqongqo ingqibelelo, coinciding kunye nemigaqo ngokubanzi kwicandelo cryptocurrency. exchange cryptocurrency nganye kuya kufuneka ukutyala ubuncinane $1 million kwisithuba seminyaka emibini imisebenzi kummandla kwakunye ubukho emzimbeni nge-ofisi kummandla, CEZA chief Raul Lambino wongezelela.
Huobi sandisa imisebenzi ne-ofisi London ne iOTC trading
Huobi Group, a asethi blockchain kumboneleli wenkonzo yemali phambili, uqala Huobi iOTC kunye Huobi Quant Trading, kwaye uvula iofisi eLondon.
Huobi iOTC izincomo iNkonzo Quant Trading, urhwebo Quant Huobi luza kuvumela abatyali ukuba uthathe ithuba imisebenzi arbitrage, ekwenziweni market, kunye noqikelelo mkhuba.
BTCC relaunches exchange crypto
BTCC, enye ibaleka inde kwaye xa top namaqonga zokurhweba ezintathu China, ubhengeze ukuba loo nto relaunching ishishini kwananwe ngayo.
Le nkampani ithe kwananwe ngayo crypto nezilungisiweyo ngoku phezulu kwaye isebenze kunye ngababini zorhwebo ezintsha kuquka Bitcoin, Litecoin, kunye nabanye. Zonke lwazo bakurholela zeedola US, Kwakhona kukho crypto ukuba iindlela zorhwebo crypto.
Ingxelo Daily Market Kraken for 01.07.2018
$57.1M wasebenza kuzo zonke iimarike namhlanje
Blockchain News 13 EyoMqungu 201...